IApartment Dawn kufuphi nesikhululo seenqwelomoya saseZagreb
IApartment Dawn ikufuphi kakhulu neSikhululo seenqwelomoya saseZagreb, kumgama ongama-3km kuphela. Ifikeleleka ngemoto ngemizuzu esi-7 kuphela. I-Apartment isanda kulungiswa ngoMeyi 2016. kwaye ixhotyiswe kakuhle kakhulu ngayo nantoni na umntu anokuyidinga ngexesha elifutshane okanye eliphakathi. Ifanelekile kwaye ifikeleleke kakhulu kwizibini, iintsapho ezinabantwana okanye iqela labahlobo ngenxa yobukhulu bayo kunye nezixhobo zokusebenzisa. Sinikezela ngezothutho ukusuka kunye nokuya kwisikhululo seenqwelomoya saseZagreb nge-10EUR indlela nganye.
Uninzi lwendlu yindawo evulekileyo kwaye ke kukho unxibelelwano olungcono phakathi kwekhitshi / igumbi lokuhlala / igumbi lokutyela. Kukho indlela yokuphuma elula kwibalcony kwaye ukuhamba ngeflethi kulula ngokubanzi.
Yindawo ezolileyo enemithi emininzi kunye nomthunzi wendalo. Ikufuphi kakhulu kumbindi weVelika Gorica apho umntu unokuhambahamba okanye abe nesidlo sasemini/sangokuhlwa.
Family man trying to balance between job and family. Like to travel, like nature and sports. My goal is to provide the best possible service to my guests, be of help for whatever t…
Nokuba ufuna ulwazi malunga ngendawo yam okanye malunga nokujikeleza eZagreb okanye eCroatia ungalibazisi ukuqhakamshelana nam. Ndikhe ndahamba uninzi lweCroatia kunye nommandla kwaye ndingavuya ukucebisa iindawo zokutyelela nokuhlala.